अक्षर स्पर्श: आलीस मिलर
"आलीस मिलर "
एउटी युहुदी युवती जसले इजराईलमा एउटा इतिहास कोरेकी छन् र उनि पछीका महिलाहरुको लागी नयाँ बाटो बनाएकी छन ।
साउथ अफ्रिकामा जन्मेकी आलीस मिलर ६ बर्षको उमेर हुदाँ इजराईल आएकी थिईन आफना आमा बाबु संग ।
उनको स्कुले शिक्षा होदाहा शरोन भन्ने शहरमा सकियो । सानै देखि तीक्ष्ण बुद्धि भएकी उनि आफ्नो समयमा आएर यती फरक होलिन भनेर सायदै कसैले सोचेका थिए होला ।
स्कुले शैक्षिक सत्र समाप्ती पछी इजराईलको नियम अनुसार सरकारलाई दुइ बर्षे श्रमदानको लागी उनले हवाई सेनालाई चुन्दै एयर फोर्स जोईन गरिन । त्यहि समयवधिमा नै उनले आफु भविष्यमा पनि एक कुशल पायलट (लडाकु बिमानको ) भएर आफ्नो जीवनयात्रा यहि एयर फोर्स संगै राख्ने निर्णय गरिन ।
यस्तो सपना देख्नु कुनै चानेचुने कुरा थिएन यहाँ पनि । उनले सपना मात्र देखिनन त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नको लागी कम्मर कसिन । उनको त्यो इच्छा उनले एयर फोर्समा राखिन तर राष्ट्रको कानून अनुसार मात्र पुरुषलाई लडाकु बिमान उडाउने अधिकार थियो । त्यसैले उनलाई देशको र एयर फोर्सको कानूनलाई मानेर हिड्ने आग्रह गरियो । उनलाई यो मन्जुर थिएन कि पुरुषले मात्र यो मौका पाउन र किन उनीहरु मात्र ? यो प्रश्नको जवाब खोज्दै उनि अदालत पुगिन आफ्नो रहरलाइ दृढता बनाएर । त्यस पछी उनको जीवनको एेतिहासिक पानाहरु कोरिन शुरु भयो । उनि धेरै विवाद अनि सबैको आँखामा परिन यो साहसले । स्वभाबिक्त बिरोध अड्चन आए तर उनको हौसला कम भएन । उनको बौद्धिकता ,आँट र हौसलाले भरिएको दलिलको अघि अन्तमा न्यायधिस पनि नतमस्तक भए र उनलाई अनुमती दिदै आउने दिनहरुमा क्षमतावान महिलाहरुलाई यो अधिकार दिने भनेर निर्णय लेखे । उनले आफ्नो जित यसैलाई भनेकी छन । यती बेला सम्म उनि निकै चर्चामा आइसकेकी थिइन् अब झन् उनको नाम नै इजराईलको इतिहासमा लेखियो । उनि एक चम्किलो ताराको रुपमा प्रसिद्ध भईन । नाम सहित उनका फोटाहरु हरेक पत्र पत्रिका अनि समाचारमा थिए । उनको नाम बच्चा बच्चा सम्म फैलियो । त्यस पछी उनि आफ्नो सपनालाई अमुर्त रुप दिन एयर फोर्सको परिक्षाको तयारीमा लागीन तर दुर्भाग्य उनले पाइलटको लागी सैनिक प्रशिक्षण पास गर्न सकिन्न । उनि त्यो परिक्षामा असफल भए पनि आज उनकै कारण इजराईलमा महिलाहरुको लागी त्यो बाटो खुल्ला भएको छ । उनि निराश भईनन । सैनिक परिक्षामा अनुतिर्ण भए पनि उनले आफ्नो सपानालाई आकाशमा उडाएरै छोडिन । उनि पाइलटको कोर्स गरेर एक कुशल पईलट भईन साथै हाइफा शहरमा अवस्थित प्रसिद्ध टेक्नियन कलेजबाट टेक्नोलोजी साइन्समा पढाई सकिन । त्यति बेला सम्म उनि र उनको नाम हरेकले उदाहरणको रुपमा लिन थालेका थिए । युनीवर्सीटीको पढाईको समाप्ती लगत्तै उनि एसियन देशको निरीक्षण साथै केहि महिना घुमघाम गर्दै गुमनाम हुने सोच बनाएर भारत पुगिन । जिन्दगी मान्छे सोचेको जस्तो कहाँ हुन्छ र ? भोलीको निर्णय समयले न हो गर्ने । भारत घुम्ने क्रममा नै उनि एउटा भारतीय युवकसंग प्रेममा परिन । हामी भन्छौ पश्चिमेलीहरु प्रेम कहाँ बुझछन र ? तर प्रेमलाई बुझ्न र बुझाउन कुनै जात, देश ,समाज सिमा कसैको पाबन्दी छैन । इजराईलमा नाम, दाम सहित प्रसिद्धि कमाएकी मल्टी ट्यालेन्ट युवतीले भारतको एउटा सामान्य केटासंग बिहे गरेर भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने सामान्य ठाउँ शिवानंदीमा आफ्नो जीवन बिताउदै छन बिगत आठ बर्ष देखि । उनि आफ्नो जीवनमा पूर्ण सन्तुष्ट रहेको बताउछिन । उनको बिहेमा परिवार सहित ४० जना इजराईलीको उपस्थिती थियो र बिहेमा कुर्ता र साडी लगाएको बयान गरेकी छन । उनका दुइ छोरी छन् जसले प्रकृती संग आफ्नो बाल्यावस्था बिताउदै छन र त्यहि बाट नै शिक्षा लिदै छन । उनका दुवै छोरी घरमै सामान्य प्रसुती द्धारा जन्मेका हुन् किनकि अस्पताल जान ६ घण्टाको सडक दुरी नाप्न पर्ने हुन्छ भनेकी छन । उनले पहिला एक चाइनिज कम्पनि संग प्राकृतिक स्वीमिंग पूलको निर्माण कार्यको लागी काम गर्ने कुरा अनि पछी त्यो कम्पनि घाटामा गए पनि उनलाई केहि नोक्सान नभएको सामान्य जानकारी लेखिएको छ पत्रिकामा । हाल उनीहरुको एउटा गेस्ट हाउस छ साथै उनका श्रीमान् गाइड पनि गर्ने गर्छन टुरिस्टहरुलाई । ऋषिकेश ,देहरादून अनि यस्तै अन्य नजिकको पर्यटकीय ठाउँहरु प्रसस्त हुँदा प्रयटकहरुको पक्कै कमी छैन त्यहाँ । इजराईलको सुख सुविधामा हुर्केर आफ्नै बृहद बौद्धिकताले संसारमा नै चिनिन सक्ने र सम्पतीमा मिलियोनर हुन् सक्ने हैसियत /क्षमता भएकी यी युवतीको सोच,त्याग महानताले मलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ र म आफु एक निहायत स्वार्थी रहेछु कि भन्ने एहसास गराएको छ ।
"इजराईललाई हरेक पल सम्झेको र कहिल्यै भुल्न नसक्ने कुरा राख्दै भारतलाई छोड्न नसक्ने कुरा पनि उनले राखेकी छन "।
यती लामो प्रसंग यहाँ लेख्नुको औचित्य यती मात्र की " हामी थोरै गरेर धेरै गर्यौ भन्दै नाम,दाम अनि के के भनेर आफैमा लुछाचुडी गर्छौ कोइ धेरै गरेर नाम,दाम सबै छोडेर गुमनाम हुदा पनि जिन्दगीमा पूर्ण सन्तुष्ट भएको र साँचो जीवनको सन्देश दिन्छन " ।
"म मेरो नियतीसंग यती नै भन्छु मलाई केहि नदिनु यहि र यस्तै सन्तुष्टि र धैर्यता दिनु "।